Indlu yasehlotyeni ene-Hot tube - I-Airbnb
Indlu yasehlotyeni ene-Hot tube
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMarko And Laura
UMarko And Laura yi-Superhost
I-cottage ehlaziywe kakuhle malunga ne-45 sqm + loft malunga ne-30 sqm
I-cottage enhle malunga ne-45 sqm + i-loft malunga ne-30 sqm
Igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini, i-sauna kunye neshawari. Loft enebhedi ezimbini kunye neebhedi ezongezelelweyo. Bayi-6 abantu abalalayo. Ekhitshini kukho ifriji, isitovu esine-oveni kunye ne-dishwasher encinci., i-koffee maker njl. Kukho igumbi lamanzi langaphakathi (elitsha ngo-2021), kunye nendlu yangasese yebhayoloji yangaphandle yangaphandle. Umatshini wokuhlamba kwindawo yangasese.
Isauna yokwenyani yaseFinland kunye neshawa yamanzi ashushu
Ukufudumeza kwindawo yomlilo, kwigumbi lokulala elikhulu kunye nekhitshi kukho neeradiyetha zombane
Ngaphandle kukho ityhubhu eshushu entle apho unokubona ichibi kunye nokutshona kwelanga, i-BBQ yegesi, indawo yomlilo, itafile, izitulo kunye nesikhephe sokubhexa simahla.
Ichibi elincinci iRuuhilampi 30m ukusuka kwindlwana. Lichibi elizolileyo kakhulu, eliphantse lafana nelabucala apho unokuhamba ubheqa kunye nokuloba. Sinezixhobo zokuloba ezisisiseko ezirentwayo. Kwakhona isibini seebhayisekile zeentaba oza kuzirenta, nceda ubuze ukufumaneka
Ukunyuka intaba, ukukha amaqunube kunye namakhowa....
Ikufutshane kwilali encinci i-Uurainen 3 km apho unokufumana khona iivenkile ezinkulu ze-f.ex. Isixeko esikhulu iJyväskylä iikhilomitha ezingama-40 kunye ne-Äänekoski iikhilomitha ezingama-27
I-cottage ifumaneka ngoMeyi ukuya ku-Oktobha
QAPHELA: Iimpahla zokulala, amashiti kunye neetawuli AKUQUKANGA kwixabiso. Ungarenta ezo 10 euro/umntu, nceda ugcine kwangaphambili
Sihlala malunga neekhilomitha ezi-1 ukusuka kwi-cottage, ngoko unokusitsalela umnxeba ukuba kukho into othanda ukuyibuza.
Sinenye i-cottage encinci ekufutshane (70 m), ngoko ke amaqela amakhulu okanye f.ex izibini ezibini zinokuqesha izindlu zangasese zombini.
Umbuki zindwendwe ngu- Marko And Laura